Myanmar R & B singer, Thiri Swe's Lovely Outdoor Fashion | Myanmar Singer and Vocalist Photos
Myanmar R & B singer, Thiri Swe's Lovely Outdoor Fashion
Thiri Swe isaMyanmar teenage singer. She is pretty and cute female singer. She becomes well-known because of the song, called " Phot Like Phot Like". She sings this song together with Sai Sai Khan Hlaing, Myanmar popular hip hop singer and actor. She has not released her solo music album yet, but she has sung in 8 multi singers music albums. Thiri said that it is not possible for her to star in videos, but she would like to take some wallpapers and posters. Here is her address : No: 8, Shin Saw Pu Street, San Chaung Township, Yangon.
Myanmar Singer Thiri Swe
Myanmar teenage singer, Myanmar beautiful girl, Thiri Swe
Myanmar cute and lovely female singer, Thiri Swe's photos
သူလေးကတော့ တက်သစ်စ အဆိုတော်ချောလေး သီရိဆွေပါ။ သူမကို ပရိတ်သတ်စတင် သတိပြုမိတာကတော့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် နဲ့ ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက် သီချင်း အတူတွဲ ဆိုစဉ်ကတည်းကပါ။ တစ်ကိုယ်တော်ခွေတော့ မထုတ်ရသေးပါဘူး ။ ပါဝင်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်း အယ်လ်ဘမ်ကတော့ ၈ ခွေလောက်ရှိပြီ။ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုတော့ ကြောက်လို့မလုပ်ဖြစ်လောက်ဘူး .. ပိုစတာ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ လောက်ဘဲ လုပ်နိုင်မယ်ထင်တယ်လို့ သီရိဆွေက ဆိုပါတယ်။ သီရိကို ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်အမှတ်(၈)၊ ရှင်စောပုဘုရားလမ်း၊ စမ်းချောင်း။
TunFebruary 25, 2009 at 12:26 PMShe is notateenager. She has already finished law school and is 24-25 now. here is the link:http://www.mmtimes.com/no382/t002.htmReplyDeleteAnonymousSeptember 5, 2009 at 7:32 PMyeah...agree with you tun.........i dont know why this web. put teenage in front of most of the gals name, no offense..I am just trying to make this better.ReplyDeleteAnonymousJanuary 7, 2010 at 12:49 PMi love your beautiful style n lovely face.ReplyDeleteAnonymousApril 1, 2010 at 12:48 PMwhy they put teenagers , without teenagers it 'll be betterReplyDeleteNa DawFebruary 9, 2011 at 7:29 PMDear သီရိဆွေ အဆိုတော်မလေးသီရိဆွေက သီချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ နားထောင်ကောင်းပါတယ်အရမ်းသဘော့ကျလိုပါ အဆိုတော်မလေးသိရိဆွေက အရမ်းချောတာပဲ အဲဒါကြောင့်သူများတွေလဲကြည့်လိုကောင်းတယ်လိုပြောနေတယ် သီရိဆွေကဘယ်မှာနေသလဲ ? ပြောပြလိုရလား ? ဘိုင် ရေးသူ/ဂျူးလီမာReplyDeleteနေမျိုးJuly 13, 2011 at 12:09 AMသူ့လိပ်စာကိုအပေါ်မှာ အက်မင်ကရေးပေးထားတယ်လေ။ReplyDeleteAdd commentLoad more...